Planet Nomads inowedzera nhau mune yayo yazvino kugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
Mapuraneti anofamba-famba mutambo wakasarudzika wevhidhiyo maunove uine hombe nyika mutorwa nemhando dzakasiyana dzehupenyu dzaunofanirwa kuongorora. Iwe unofanirwa kubata zviwanikwa uye kuunganidza izvo zviripo zvekuvaka yako nhare yekutsvaga base, nenzira iyi iwe unogona kuita yako isinganzwisisike uye inonakidza rwendo kuburikidza nenyika isingazivikanwe zvachose. Unogona kuona rumwe ruzivo mu yayo yepamutemo webhusaiti,uye kana iwe uchifarira kuitenga, unogona achiri kubata iyo 30% yekupa iri muchitoro cheValve, chiutsi. Ehe iri zvakare inowanikwa mu Gogi Uine mutengo wakadaro, nzvimbo yaunotenga ndiyo sarudzo yako ...
Zvakanaka, kunyangwe iwe waitoziva zita iri kana uchiri kufunga nezvekutora, ikozvino tinokuzivisa iwe kuti kuvhurwa kwakaitwa ne yakanaka yekuvandudza izvo zvinounza kuvandudzwa uye zvimwe zvirimo kuti usazobhowekana nePlanet Nomads. Pakati pezvinhu zvitsva zvichave kugona kugadzira mhando dzese dzendege dzisinga chikamu chezvivakwa zvevatorwa zvaunofanira kuwana. Chinhu chakashata ndeche kuita kuchiri kusiya zvishoma kudikanwasezvo isina kunyanyisa kukwidziridzwa. Naizvozvo, kunyangwe neakakwira-kuita Hardware kumisikidza mutambo haufambe zvakanaka sezvazvinofanira. Nekudaro, dambudziko iri rinotarisira kugadziriswa mune ramangwana nekuvandudzwa kutsva, kana isu tinotarisira. Izvi hazvireve kuti hazvishande, kungoti hazviite kuti ive mvura yakakwana sezvaungatarisira. Kunyangwe muchikamu chiri chakakonzerwa nechikamu chekutanga umo chiri mukusimudzira kwayo ...
Iyo Planet Nomads mutambo wevhidhiyo ine zvakawanda zvinogoneka Uye iyo huru yezvinyorwa izvo iyo nyowani yekuvandudza inowedzera zvinoita kuti iwe uregerere iyo diki yekuita nyaya. Ichokwadi zita rinonakidza rauchazoshandisa maawa ekunakidzwa (kunyangwe vamwe vangangodaro vasina kufarira kudzoreredza kwemaitiro evazhinji). Zvichida nemamwe makuru makuru anotarisirwa izvo zvese izvo zvino cons zvichachinja.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Planet Nomads inowedzera nhau mukuvandudzwa kwayo kwazvino
Richard Stallman akabatwa muchitima muExtremadura ...